❤️'IeSanti zaseMazantsi'❤️ kwiApartment yaseBeachfront
I-townhouse yonke sinombuki zindwendwe onguUnwind Holidays
Unwind ngeeholide izipho: Southern Sands no 2! Ngokuqinisekileyo uya kuyonwabela le ndawo ibekwe kakuhle kwaye igcinwe kakuhle ukusukela oko ufika. Sinikezela ngepropathi entle yokulala eyi-2. Le propathi yenzelwe ukonwabisa wena engqondweni. I-TOP yokukhetha indawo yokuhlala yeholide yasePort Elliot ngaphandle kwamathandabuzo.
*Ilinen kunye neTowels yiBYO okanye iyaQesha*
Unwind ngeeHolide izipho:
iSanti zaseMzantsi 2
Idilesi: 2/2 Hutton Street, Port Elliot
Uya kuwuthanda umbono omangalisayo ukusuka kumgangatho wayo ukuya kwiifestile zesilingi, ukubukela ii-surfers, iidolphin kunye neengonyama zolwandle ziqubha ngaphambili, kwaye ngamanye amaxesha nokuba ngumnenga. Ngokuhlwa, unokuhlala kwaye ubukele ukutshona kwelanga okuzukileyo kunye nezibane ezikhanyayo ze-Victor Harbor. Kamva uya kulala uphulaphule amaza agquba elunxwemeni.
Indawo yokuhlala ine-WiFi enesantya esiphezulu se-NBN kunye ne-Smart TV entsha ukuze ukwazi ukubukela imiboniso oyithandayo usebenzisa imirhumo yakho yokusasaza. Kukwakho nentaphane yeeDVD, imidlalo kunye neencwadi. Inekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, kodwa ukuba uyathanda ungaphakathi komgama wokuhamba ukuya kwiindawo zokutyela zasekhaya.
Ukuhamba nje yimizuzu emi-5 ukuya kwindawo entle yeHorseshoe Bay kunye nokufikelela ngokulula kwindlela yokuhamba / yebhayisekile kunye nezinye izinto ezininzi ezinomtsalane kubakhenkethi basekhaya nakwingingqi ezifana neendawo zokuthengisa iwayini kunye neevenkile zakudala. Ukuhamba nje ngokufutshane ukuya eMiddleton, eGoolwa naseVictor Harbour.
Uya kuyonwabela le propathi ukusukela oko uphuma phandle. Ngaphakathi, iyathandeka kwaye iphangalele ngesicwangciso esivulekileyo sokuhlala, indawo yokutya kunye neyokuphekela, i-air-conditioning (umjikelo obuyela umva), amagumbi okuhlambela ayi-2 kunye nezindlu zangasese ezi-2.
Indlu edume kakhulu nethandwayo yokurenta iholide entliziyweni yePort Elliot iya kukwenza ukuba ubuyele ukonwabela kwakhona kwaye kwakhona. Sithatha inkathalo eyongezelelweyo ukuqinisekisa ukuba unamava angcono.
Ipropathi ebanzi enemigangatho emibini
Ngoku nge-WIFI kunye ne-SMART TV !!!
Amagumbi okuhlambela abekwe kuwo omabini amanqanaba; 1 phezulu, 1 phantsi,
ilungele abantu/amaqela kunye nosapho ukubaleka kuwo onke amaxesha onyaka!
Port Elliot - FUN - BEACH - BAKERY - ISAND - ILANGA - UKUTHENGA - PHUMELA
Umbuki zindwendwe ngu- Unwind Holidays
Izimvo eziyi-1 346
Indlu edume kakhulu nethandwayo yokurenta iholide entliziyweni yePort Elliot iya kukwenza ukuba ubuyele ukonwabela kwakhona kwaye kwakhona. Sithatha inkathalo eyongezelelweyo ukuqinisekisa ukuba unamava angcono. Hamba ungene kwiibhedi ezenziwe, iitawuli zilungele ukuhamba kunye nezibonelelo ezisisiseko kwi-pantry.
Indlu edume kakhulu nethandwayo yokurenta iholide entliziyweni yePort Elliot iya kukwenza ukuba ubuyele ukonwabela kwakhona kwaye kwakhona. Sithatha inkathalo eyongezelelweyo ukuqi…